Global Voices Podcast: Bodoy Ity! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2012 13:21 GMT
Vakio amin'ny teny Dansk, বাংলা, srpski, Français, Español, English
Tonga soa eto amin'ny tafatafam-baovao Global Voices podcast andiany hafa ity. Amin'ity fizarana ity no iresahantsika ny hevitra sy ny olana manodidina ny hetsi-panoherana ataon'ny Hetsika Bodoy manerantany, rehefa mihaino ny raki-peo alefan'ny ekipa avy amin'ny vazantany efatra isika
Grika Mpiara-Mivahiny Amiko
Amin'ity fizarana ity, “bodoiko” ny podcast miaraka amin'i Asteris Masouras, mpanoratra ao amin'ny Global Voices sy tonian-dahatsoratra ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Grika .
Nanaraka akaiky ny hetsika an-tserasera #Occupy manerantany hatramin'ny nanombohany Asteris. Koa iza indray ary no hiara-dia amintsika amin'ity andiana podcast iray ity?
Niaraka niresaka tamin'ny alalan'ny Skype sy niady hevitra momba an'i Gresy, Eoropa, ary ny Bodoy izao tontolo izao izahay, indrindra momba ny fifampitan-kafatra ao anatin'ny hetsika sy amin'ny hetsika hafa.
Bodoy i Danemarka
Maria Grabowski Kjær ao Danemarka, tonian-dahatsoratra miara miasa aminay ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Danoà , nitsidika ny Fibodoana tao hahitany ny fomba fiasa sy ny hafatra ifandefasana. Na dia maro aza ny mihevitra fa ireny karazana “hippies” ireny ny mpanao fihetsiketsehana dia nandresy lahatra hanala izany fomba fihevitra izany i Thomas, izay nanampy tamin'ny fikarakarana ny hetsika tao Danemarka.
Thomas tao amin'ny Bodoy Danemarka niresaka tamin'i Maria Grabowski Kjier mikasika ny hetsika
Eto Londres, naseho tao amin'ny gazety antsoina hoe Fotoana Fibodoana an'i Londres [The Occupied Times of London] ny hetsika bodoy tao amin'ny Katedraly St Paul. Nihaona tamin'i Steve Maclean, tonian-dahatsoratry ny gazety, mba hijery ny fomba fandehan'izany aho.
Bodoy Londre, Steve Maclean, tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety Occupied Times
Toby Filasiana ao Maine
Mpamokatra fandaharana ao amin'ny onjam-peo tsy miankina i Frances Harlow, ary namana ao amin'ny Global Voices. Ao Portland, Maine ao Etazonia, naka-feo tao amin'ny toerana misy ny toby filasiana bodoy nandritra ny fianarany tao amin'ny Toeram-pampianarana ambony ao Salt izy, taoriana ny nahazoany mari-pahaizana tao amin'ny Oniversite Brown.
Mampiseho ny tatitra avy amin'i Frances fa tsy voatery ho mora foana ny manamafy orina ny lahatsoratra eo amin'ireo olona mpankafy izany. Afaka mihaino bebe kokoa ny asa mamiratra ao amin'ny onjam-peon'i Frances ianao eto.
Ahoana ny fandraisanao ny hetsika Bodoy manerantany? Misy toby filasiana ve any akaikinao ary mandray anjara ve ianao?
Tsy mora ny mampiditra ny hetsika rehetra ato amin'ny podcast somary fohifohy saingy mahaliana kosa raha hasongadina ny fitoviany sy ny fahasamihafany manerana ny vazatany efatra. Misy karazany maro be afaka vakianao ato amin'ny pejy fitantarana manokana momba ny hetsika Bodoy manerantany ao amin'ny Global Voices.
Ato amin'ny podcast, afaka mihaino mozika mahaliana betsaka nahazoana alalana koa ianao. Misaotra an'i Mark Cotton noho ny famoronana mahafinaritra nataony ary misaotra ny rehetra ihany koa noho ny feo kanto mihoatra noho ny tsara sy ny horonan-tsary izay nanampy tamin'ny fanangonana miaraka ny podcast.
Global Voices Podcast, mandefa vaovao izao tontolo izao, mino izahay fa mihaino ianao!